ထိပျကပျနာကွောငျ့ ကိုကျတဲ့ခေါငျး - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ခေါငျးကိုကျစတေဲ့ အကွောငျးရငျးပေါငျးမြားစှာထဲက လူတှေ သိပျသတိမထားမိတဲ့ ရောဂါတဈခုကတော့ ထိပျကပျနာပါပဲ။ ထိပျကပျနာလို့ ပွောရငျ တျောတျောမြားမြားက နှာစေး..နှာပိတျ..နှာခေါငျးမှာဖွဈတဲ့ ပွဿနာလို့ပဲ သိကွတယျ။ ခေါငျးနဲ့ မကျြရိုးမကွာခဏကိုကျနတေတျတဲ့ လူနာတျောတျောမြားမြားမှာ ထိပျကပျနာရှိနတေတျပွီး ထိပျကပျနာကို ကုလိုကျတော့မှ ခေါငျးကိုကျပြောကျသှားတတျပါတယျ။
? ထိပျကပျနာဆိုတာဘာလဲ ??
ထိပျကပျနာလို့ အလှယျချေါတတျကွတဲ့ Sinusitis ဆိုတာ နှဖူး၊ ပါးရိုးနဲ့ နှာခေါငျးအောကျမှာရှိတဲ့ နှာခေါငျးနဲ့ဆကျသှယျထားတဲ့ Sinus လို့ချေါတဲ့ လှိုဏျခေါငျးလေးတှေ ပိတျဆို့ ရောငျရမျးတဲ့ ရောဂါတဈခုဖွဈပါတယျ။
Sinus လှိုဏျခေါငျးလေးတှရေဲ့ mucous membrane အလှာက ထုတျပေးတဲ့ mucous အခြှဲတှကေ နှာခေါငျးပေါကျကနေ ဝငျလာတဲ့လတှေကေို နှေးထှေးသနျ့စငျအောငျလုပျပေးရပါတယျ။
နှာခေါငျးအတှငျးပိုငျးနဲ့ ဒီ sinus လှိုဏျခေါငျးတှကေို ဆကျထားတဲ့ လမျးကွောငျးပိတျသှားတဲ့အခါ mucous အခြှဲတှေ sinus တှထေဲမှာ ပိတျမိသှားပါတယျ။
ဒီအခါမှာ bacteria ပိုးတှေ ပေါကျပှားလာပွီး sinusitis ရောဂါဖွဈလာပါတော့တယျ။
? ဘာလက်ခဏာတှေ ပွမလဲ ??
• ခေါငျးကိုကျ သှားကိုကျ မကျြရိုးတှကေိုကျ
• နှာရညျပဈြပဈြ ဝါဝါ စိမျးစိမျးတှထှေကျ
• နှာခေါငျးအနောကျ လညျခြောငျးထဲမှာ ခြှဲအမွဲတမျးရှိနသေလိုဖွဈ(post nasal drip လို့ချေါ)
• အဖြား မကွာခဏတကျ
• အနံ့သိပျမရ လြှာအရသာခံနိုငျစှမျးလြော့
? ဘာကွောငျ့ဖွဈတာလဲ ??
အအေးမိနှာစေးပွီးနောကျမှာ ထိပျကပျနာဖွဈကနျြနတေတျပါတယျ။ ခဏနဲ့ ပြောကျသှားတတျသလို နာတာရှညျ ဖွဈနတောမြိုးလညျး အဖွဈမြားပါတယျ။ နှာခေါငျးတှငျး nasal polypအဖုအသီးလေးတှေ ရှိရငျ ပိုဖွဈတတျပွီး ဓာတျမတညျ့တဲ့ Allergic ပွဿနာရှိသူတှမှောလညျး အဖွဈမြားပါတယျ။
? ဘာတှကွေောငျ့ ပိုဆိုးစမေလဲ ??
• ဓာတျမတညျ့လို့ နာတာရှညျ နှာခေါငျးအတှငျးပိုငျးရောငျနတေဲ့ Allergic Rhinitis ရှိရငျ
• ပနျးနာရငျကွပျနဲ့ hayfever ရောဂါ
• cystic fibrosis ရောဂါရှိရငျ
• အညှျော၊ဖုနျ၊ အမှုနျအမှား၊ အနံ့ဆိုးဆိုးနဲ့ ဓာတုပစ်စညျးနံ့တှေ အမွဲရှူနရေရငျ
• အသကျရှူလမျးကွောငျးတဈလြှောကျ ရောငျရမျးစတေဲ့ Wegeners Granulomatosis လို Sarcoidosis လို ရောဂါတဈခုခုရှိနရေငျ
• မကျြနှာထိခိုကျဖူးရငျ ခှဲစိတျမှုလုပျထားဖူးရငျ
• သှားနဲ့ခံတှငျးမှာ ပိုးဝငျရငျ
ဒီလိုအခွအေနတှေမှော ပိုဖွဈတတျ ပိုဆိုးစတေတျလို့ သတိထားရပါမယျ။
? ဘယျလိုသကျသာအောငျလုပျရမလဲ ??
– ခေါငျးကိုကျတာနဲ့ တခွားနာကငျြကိုကျခဲတာတှအေတှကျ ခေါငျးကိုကျပြောကျဆေး..အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှေ လိုအပျပါတယျ
– နှာခေါငျးပိတျတာ နှာစေးတာအတှကျ နှာစေးပြောကျဆေးတှနေဲ့ နှာခေါငျးပှငျ့စမေဲ့ Nasal Decongestant သောကျဆေး ဖနျြးဆေးတှေ လိုပါတယျ
– သိပျဆိုးရငျ ဆေးရုံတကျပွီး ဆေးသှငျးကုသဖို့အထိ လိုတတျပါတယျ။
– လကေောငျးလသေနျ့ အမွဲရှူရဖို့နဲ့ အသကျရှူလကေ့ငျြ့ခနျးတှလေုပျပေးဖို့ လိုပါတယျ
– ကိုယျခံအားကောငျးအောငျ နထေိုငျစားသောကျဖို့ အိပျခြိနျပွညျ့ဝဖို့လညျး အရေးကွီးပါတယျ။
အားလုံး ခေါငျးကိုကျပြောကျပွီး အသကျဝဝရှူနိုငျကွပါစေ..
ခေါင်းကိုက်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းပေါင်းများစွာထဲက လူတွေ သိပ်သတိမထားမိတဲ့ ရောဂါတစ်ခုကတော့ ထိပ်ကပ်နာပါပဲ။ ထိပ်ကပ်နာလို့ ပြောရင် တော်တော်များများက နှာစေး..နှာပိတ်..နှာခေါင်းမှာဖြစ်တဲ့ ပြဿနာလို့ပဲ သိကြတယ်။ ခေါင်းနဲ့ မျက်ရိုးမကြာခဏကိုက်နေတတ်တဲ့ လူနာတော်တော်များများမှာ ထိပ်ကပ်နာရှိနေတတ်ပြီး ထိပ်ကပ်နာကို ကုလိုက်တော့မှ ခေါင်းကိုက်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။
? ထိပ်ကပ်နာဆိုတာဘာလဲ ??
ထိပ်ကပ်နာလို့ အလွယ်ခေါ်တတ်ကြတဲ့ Sinusitis ဆိုတာ နှဖူး၊ ပါးရိုးနဲ့ နှာခေါင်းအောက်မှာရှိတဲ့ နှာခေါင်းနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ Sinus လို့ခေါ်တဲ့ လှိုဏ်ခေါင်းလေးတွေ ပိတ်ဆို့ ရောင်ရမ်းတဲ့ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Sinus လှိုဏ်ခေါင်းလေးတွေရဲ့ mucous membrane အလွှာက ထုတ်ပေးတဲ့ mucous အချွဲတွေက နှာခေါင်းပေါက်ကနေ ဝင်လာတဲ့လေတွေကို နွေးထွေးသန့်စင်အောင်လုပ်ပေးရပါတယ်။
နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းနဲ့ ဒီ sinus လှိုဏ်ခေါင်းတွေကို ဆက်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းပိတ်သွားတဲ့အခါ mucous အချွဲတွေ sinus တွေထဲမှာ ပိတ်မိသွားပါတယ်။
ဒီအခါမှာ bacteria ပိုးတွေ ပေါက်ပွားလာပြီး sinusitis ရောဂါဖြစ်လာပါတော့တယ်။
? ဘာလက္ခဏာတွေ ပြမလဲ ??
• ခေါင်းကိုက် သွားကိုက် မျက်ရိုးတွေကိုက်
• နှာရည်ပျစ်ပျစ် ဝါဝါ စိမ်းစိမ်းတွေထွက်
• နှာခေါင်းအနောက် လည်ချောင်းထဲမှာ ချွဲအမြဲတမ်းရှိနေသလိုဖြစ်(post nasal drip လို့ခေါ်)
• အဖျား မကြာခဏတက်
• အနံ့သိပ်မရ လျှာအရသာခံနိုင်စွမ်းလျော့
? ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ ??
အအေးမိနှာစေးပြီးနောက်မှာ ထိပ်ကပ်နာဖြစ်ကျန်နေတတ်ပါတယ်။ ခဏနဲ့ ပျောက်သွားတတ်သလို နာတာရှည် ဖြစ်နေတာမျိုးလည်း အဖြစ်များပါတယ်။ နှာခေါင်းတွင်း nasal polypအဖုအသီးလေးတွေ ရှိရင် ပိုဖြစ်တတ်ပြီး ဓာတ်မတည့်တဲ့ Allergic ပြဿနာရှိသူတွေမှာလည်း အဖြစ်များပါတယ်။
? ဘာတွေကြောင့် ပိုဆိုးစေမလဲ ??
• ဓာတ်မတည့်လို့ နာတာရှည် နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းရောင်နေတဲ့ Allergic Rhinitis ရှိရင်
• ပန်းနာရင်ကြပ်နဲ့ hayfever ရောဂါ
• cystic fibrosis ရောဂါရှိရင်
• အညှော်၊ဖုန်၊ အမှုန်အမွှား၊ အနံ့ဆိုးဆိုးနဲ့ ဓာတုပစ္စည်းနံ့တွေ အမြဲရှူနေရရင်
• အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ရောင်ရမ်းစေတဲ့ Wegeners Granulomatosis လို Sarcoidosis လို ရောဂါတစ်ခုခုရှိနေရင်
• မျက်နှာထိခိုက်ဖူးရင် ခွဲစ်ိတ်မှုလုပ်ထားဖူးရင်
• သွားနဲ့ခံတွင်းမှာ ပိုးဝင်ရင်
ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ် ပိုဆိုးစေတတ်လို့ သတိထားရပါမယ်။
? ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်ရမလဲ ??
– ခေါင်းကိုက်တာနဲ့ တခြားနာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေအတွက် ခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေး..အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ လိုအပ်ပါတယ်
– နှာခေါင်းပိတ်တာ နှာစေးတာအတွက် နှာစေးပျောက်ဆေးတွေနဲ့ နှာခေါင်းပွင့်စေမဲ့ Nasal Decongestant သောက်ဆေး ဖျန်းဆေးတွေ လိုပါတယ်
– သိပ်ဆိုးရင် ဆေးရုံတက်ပြီး ဆေးသွင်းကုသဖို့အထိ လိုတတ်ပါတယ်။
– လေကောင်းလေသန့် အမြဲရှူရဖို့နဲ့ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်
– ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် နေထိုင်စားသောက်ဖို့ အိပ်ချိန်ပြည့်ဝဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။
အားလုံး ခေါင်းကိုက်ပျောက်ပြီး အသက်ဝဝရှူနိုင်ကြပါစေ..
ရိုးရိုးခေါငျးကိုကျတာလား ဦးနှောကျထဲက အကွိတျလား
ရာသီအကူးအပွောငျးမှာ ဖွဈတတျတဲ့ ဖြားနာကိုကျခဲခွငျးနဲ့ ကနျြးမာရေးပွဿနာမြား ?